“ ကြောင် ” နှင့် “ ကြွက် ” ဘာ ကြောင့် မ တည့် ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » “ ကြောင် ” နှင့် “ ကြွက် ” ဘာ ကြောင့် မ တည့် ?
ကျနော် သည် ပို့စ် များ ကို ရေး တတ် ၍ ရေး နေချင်း မ ဟုတ် ရ ပါ ၊
၉ –5၁၀ –6၁ –7၂ – 8 ၃ –9၄ – 10 ၅ – 11 ၆ – 12 ၇ – 1 ၈ – 2
၉ –3၁၀ –4၁ –5၂ –6၃ –7၄ – 8 ၅ –9၆ – 10 ၇ – 11 ၈ – 12
၉ – 1 ၁၀ –2၁ –3၂ –4၃ –5၄ –6၅ –7၆ – 8 ၇ –9၈ – 10
၉ – 11 ၁၀ – 12 ၁ – 1 ၂ –2၃ –3၄ –4၅ –5၆ –6၇ –7၈ – 8
၉ –9၁၀ – 10 ၁ – 11 ၂ – 12 ၃ – 1 ၄ –2၅ –3၆ –4၇ –5၈ – 6
၉ –7၁၀ – 8 ၁ –9၂ – 10 ၃ – 11 ၄ – 12 ၅ – 1 ၆ –2၇ –3၈ – 4
ကျ နော် သည် အ ပေါ် ယံ လောက် သာ နား လည် သည့် အ တွက် ဖြီ ဖြန်း နေ သည် ဟု ယူ ဆ ရင် လည်း မ မှား ပါ ။
အထက် ပါ အ ကြောင်း ကို နား မ လည် ရင် လည်း အ ရေး မ ကြီး ပါ ၊ အ ဓိ က ရေး ချင် တာ က အောက် ပါ အ ကြောင်း ဖြစ် ပါ သည် ။
ခိုင် လုံ သော အ နောက် ရပ် ကွက် မှ လာ သော သတင်း အ ရ ၊ ကြောင် ( ကြီး ) သည် ကြွက် နှင့် မူ လ က အ လွန် ခင် မင် ရင်းနှီး သော သူ ငယ်ချင်း ရောင်း ရင်း များ ဖြစ် ကြ ပါ သည် ၊ တရုတ် သကြား မင်း ၏ စီ စဉ် မှု ဖြင့် ၊ အ ကောင် များ ရွေး ချယ် ဖို့ ရန် interview ခေါ် လိုက် သည့် အ ခါ ၊ view သည့် ရက် မတိုင် မှီ ည မှာ ၊ ကြောင် ( ကြီး ) သည် ဘီယာ နှင့် ထန်းရည် ခါး ရော သောက် ပြီး ၊ လေး ဘက် လှန် အ မူး လွန် နေ သော ကြောင့် ၊ နောက် ရက် ၏ interview သို့ မ တက် ရောက် နိုင် ခဲ့ ချေ ၊ ကြောင် ( ကြီး ) သည် သူ ၏ အ ခင်း ဆုံး သူ ငယ် ချင်း ဖြစ် တဲ့ ကြွက် သည် သူ့ ကို မ နိုး ၊ နိုး အောင် ၊ မ နိုး ရ ကောင်း လား ဟု အ ရမ်း စိတ် ဆိုး ပြီး ၊ ထို နေ့ မှ စ ၍ ၎င်း ကိုယ် တိုင် ဦး ဆောင်ပြီး နှောင် လာ နောက် သား များ နှင့် အ တူ ကြွက် များ ကို လိုက် လံ ၊ ဖမ်း စီး ကိုက် သတ် လေ ပါ တော့ သည် ၊ ယ နေ့ တိုင် အ စဉ် အ လာ တ ခု ဖြစ် သွား ပါ သည်။
ထို့ ကြောင့် တရုတ် ကြီး များ သည် ကြောင် ( ကြီး ) ကို အား နာသွား ပြီး အောက် ပါ ဆိုရိုး စကား ဖြင့် ကြောင် ( ကြီး ) ကို ချီး ကျူး ဂုဏ် ပြု လိုက် ပါ သည် ၊ အ များ ပြည် သူ ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လည်း သုံး စွဲ ခိုင်း ကြ ပါ သည် ။
အ ထက် ပါ အ ချက် အ လက် များ အား လုံး ကို ခြုံ ကြည့် လိုက် မည် ဆို ရင် ၊ MG မှ ဆရာ ကြောင် ကြီး လုံး ဝ မဟုတ် နိုင် ကြောင်း ၊ ကျ နော် သည် အ ခု လေး သင် ထိုင်ပေ မြို့ ရှိ “ ပန်းသီးနေ့စဉ် ” အား အ ကြောင်း ပြန် ကြား လိုက် ပါ ပြီ ။
Russia Idol ဖြစ် သည့် Maria Sharapova သည် ရှေ့ လ ၌ လန်ဒန် တွင် ကျင်း ပ မည့် အိုလံပစ်ပွဲ ၏ ဖွင့် ပွဲအ ခမ်းနား တွင် Russia နိုင်ငံ ရဲ့ ထိပ် ဆုံး အ လံ တော် ကို ကိုင် ဆောင် သူ အ ဖြစ် ဖြင့် ရွေး ချယ် ခံ ရ ကြောင်း ၊ ဤ သ တင်း ကောင်း အား Facebook မှ တ ဆင့် သူ မ ၏ သူ ငယ် ချင်း များ ကို ရှဲ လိုက် ပါ သည် ။
ဒါ က တော့ မိုင် ဝိုက် F်ရဲ့ privacy ၊ ကျ နော် မျိုး ထုတ် ဖေါ် ပိုင် ခွင့် မ ရှိ ပါ ဗျာ့ ~~~
မိတ် ဆွေ ! ပင် ပန်း သွား ပြီ လား အ ဖျော် ယ မ ကာ လေး တ ခွက် သောက် လိုက် ကြ ရ အောင် ။
ရွှင် လန်း ချမ်း မြေက ကြ ပါ စေ ~~~
ရှင်းနေတာပဲ ကြွက်က ဆမ်ဆွန်း ဂလက်ဇီကိုင်တယ် ကြောင်က အိုင်ဖုန်းမှအိုင်ဖုန်း အဲဒါကြောင့် မတည့်ခြင်း ဖြစ်သည် ဒန့်တန့်တန့်
မတည့်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ နှစ်ကောင်စလုံးအလွန်ဆိုးသော သတ္တ၀ါများဖြစ်သောကြောင့်တည်း….
MGက ကိုကြောင်ကြီး မဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြထားတာလေး မိုက်သဗျာ။
ဘယ်အကွက်ရောက်ရင် ဘာဆိုတာလည်း ပြောဗာအုံး။ တရုတ်အယူ ဘာကောင်ညာကောင် သတ်မှတ်တာ မွေးတဲ့နေ့ထက် မွေးချိန်အပိုင်းအခြားကို သတ်မှတ်တာလား၊ ကျနော်ဖတ်ဖူးဒါ ရက်အပိုင်းအခြားအလိုက် သတ်မှတ်တာလားလို့…။ ကြောင်ကြီး တရုတ်မကြိုက်တာ အပြစ်လားဗျာ..။
မတော်တဆ ဆရာ ကြောင် ကြီး ကို ပြစ် မှား မိ တာ sorry ဘဲ ။
ကြောင်ဂျီးကို ကျီစယ်ရင်း ဗဟုသုတလေးတွေ ပေးသွားတာထင်ပါ့
ဆ ရာ ဗိုက် ~~~
Date လွန်ဘိုးတော်တယေါက် ဖြစ်ပေသေးလို့သာပဲ
မရှက်တရား ၄ပါးကို မှတ်သားသွားပါတယ်။
ဆရာရေ-ဆရာလို့ ခေါ်တာကို ဆရာက မကြိုက်ရင် ဆရာလို့ ခေါ်တာကို ပြုပြင်ပြီး ဆရာလို့ မခေါ်ပဲ ဆရာမ လုိ့ ခေါ်ပါမည်။
လေး စား ရ သော မမ ~~~
ကျုပ်လဲဖတ်နေရင်းနဲ့ အရမ်းရှက်လာဘီဗျာ…. ဟီဟိ
ဆရာ ပေ ရေ ~~~~